Baafin ku Jeeda Somalida Degan Toronto (Canada)
Waad Salamantihiin dhamaan
Waxaan ahay nin dadka Soomaalida ee soo gala dalkan US , ama lagu xiro ama la geeyo xabsiyada dalkan, gaar ahaan NYC , NJ, FL iyo meelo kale caawiya.
Anigoo taasi ugu qabta dhinaca aadamnimada. Hase ahaatee maanta waxaan la kulmay dumar (haweenay) ka timid Hargeisa, laguna haayo Xabsiga NJ .
Waana 66 jir, gacana waa go'antahay, hasee ahaate waxaa halkani keentay gabadh ay isku soo raaceen Hargeysa. Laakin ayadu ujeedadeeda sida ay igu tiri waxay ahay in lagu daabeeyn doono Toronto oo u jooga laba wiil ay (aunt ) aayo u tahay , la kalana yiraahdo Bashiir Xuseein Xersi Maxamed Rashiid Xersi.
Hadaba anigoo aad ugu nahay marka la keenay oo la igu yiri bal islaantaan wareeyso siday halkani ku soo gaartey ee ku kaalmeyey, anigu koleyba ayadaan kaalmo siinayaa hadii ay tiraahdo sidaasi baan ku imid.
Arrinta maanta waxay taagantahay in la helo dadkaasi kor ku xusan ama haddi aad taqaanin qof duqdaasi oo kale safarkaasi soo geliyey lacagna ka bixiyey.
Arrinta hada waxay tahay waan soo dayn karaa anigu laakin waxaan u baahnay qof kale kafaalad u sameyn karo waayo teeyda keliye lama ogolaan karo.
Marka dadkana waxay ka ordaayaan lacag qof lacag rabo ma jiraan hasee ahaate waxaad ii soo raadisan dad qoftaasi oo klae ka maqan kana timid Hargeisa .
Qabiilka ay ii sheegtay waa Isaaq - Gudabuuri - kana tirsan reer Xareed.
Walalyaal hadii aad wax war iig keeni kartaan arrintani fadlan ila xiriira 212 926 6140 Waxaana la i yiraahda Maxamed Bana Maxamed waxaan ka shaqeeynjirey Wasaaradda Waxbarashadda gaar ahaan gobolka Banaadir ahaana jirey Maamule Dugsiga Xamar Jab Jab .